Shahiid Suleymaan Maxamed Abuukar (Abuu Ridwaan) | Nabadi caadalad ayaa kaa horresa
Shahiid Suleymaan Maxamed Abuukar (Abuu Ridwaan)	Seteembar 25, 2008
Shahiidkeena maanta aan ka taariikhayn doonaa, waa baal dahab ah oo ku xardhan taariikhda muslimiinta. Waa geesi keeno diid ah, oo aan boqol nin jidka uga bayrin! Isagoo dhallinyarada muqdisho ka mid ah ayuu hadana ku guulaystay inuu magaciisu waaro, Taariikhdiisana wuxuu ku qoray dhiigiisa qaaliga ah! iyo dheecaankiisa uu Ilaahay u hibeeyey. Waxaad moodaa inuu kula joogo; isagoo fagaaraha geesiyaashu isku arkaan xarago u soconaya oo leh:
Annagu waa dhex joognaa
Ninkii dhimanayow kaalay
Suleyman Maxamed Abuukar (Abuu Ridwaan), dadka aqoonta u lahaa marka magaciisa la xasuusiyo illinta ma ceshadaan! oo boholyow dartii isma celiyaan. Shahiidkeena Suleymaan waxaa si toosa inooga waramaya walaalkiis oo taariikhdiisa talaabo talaabo ula socday:
“Suleymaan wuxuu ku dhashay degmada Dharkanleey ee Muqdisho kuna barbaaray. Dugsi Qur’aanka wuxuu ka bilaabay xaafadda Wardhiigley, markii dambana isagaa iskii u xifdiyey. Qiraa’ooyinka kala duwan wuxuu ka bartay Camra iyo Qaaluun.
Maxkamadaha Islaamiga ah markii laga sameeyay Muqdisho ayuu ku biiray, wuxuu ka mid ahaa ciidamadii u baxay gobolka Shab – eelada Hoose, halkaa oo uu ku sugnaa labo sano. markii ay arkeen taliyayaashii ciidamadii halkaa joogay geesinimada Suleymaan way jeclaadeen, waxayna ka codsadeen inuu la sii joogo.
Suleymaan oo hawlahan daacad u waday oo jano ku raadinayey, way u cuntami weyday inuu ku dhex jiro mugdigaa ay galeen ciidamadii maxkamaduhu Dawladdii Carta ka dib, wuxuu u soo wareegay Maxka – madda Xararyaale. Suleymaan illeen waa xaqdoone, wuxuu saluugay markuu arkay inaan shareecada si buuxda loo hirgalin.
markaa ayuu ka gaabsaday, ugu dambayntii Allaah wuxuu waafaj-iyay inuu helay dhalin mujaahidiin mutadawiciin ah oo leh Sifaadkii uu rabay, halkaas oo uu ka helay tababaro milatari oo heer sare ah.
Xaaladu markay halkaa marayso mid walaalaha Islaamka ka mid ah ayaa aniga iyo walaalkay Suleymaan, wuxuu inoo soo bandhigay inaan dugsi ka qabano Buulo Mareer, waan ka ogolaanay. Markuu labo sano ila joogay ayuu maqlay rag u baxaya jihaad meelo wadanka dibadiisa ah. Safarkii markuu diyaarsaday, ayuu taleefan igula soo xiriiray, isagoo leh: “walaal safar aan in badan sugayay ayaa hada ii soo baxay waanan tagayaa”.
waxaan ku iri: “Walaal, Safarkaa aniguba inbadan ayaan sugayey”. waxaanan ka codsaday inaan anigu tago oo isagu sii joogo oo hawlaha aan kaga tago. Wuxuu iigu jawaabay: “walaal, haddii safarka aduunyo lagu soo helayo, waan kuu dayn lahaa laakiin waxa loo socdaa waa janno”. Wuxuu intaa ku daray: “walaal deynta la igu leeyahay iga bixi si aan qiyaamaha la iigu qabsan. Haddii aan soo noqdo waan israaci doonaa, haddii aan shahaado helana waa midaan rajeynayo”. Wuxuu ahaa nin waalidkii aad u jecel Hadaladii uu hooyadii kula dardaarmay waxaa ka mid ahaa: “Hooyo, anigu safar ayaan u socdaa, waxaan doonayaa safar afar bilood inaan ku maqnaado, safarkaygu waa safar dheer, waa safar ay wax walba ka suurto gali karaan. Haddii ay wax dhacaan hooyooy, samir iina soo ducee”.
Sidoo kale hadaladii uu xaaskiisa ku yiri waxaa ka mid ahaa: “Walaal anigu safar ayaan galayaa, waxa laga yaabaa cunugayga caloosha ku jira inaanan arkin! Haddii uu noqdo wiil, waxaan kugula dardaar-mayaa inaad u bixiso Ridwaan. Safarkii ayuu ku dhaqaaqay.
Labaatan cisho ka dibna Allaah ayaa shahaado siiyay. Waxaanu Allaah ka baryeynaa inuu ka aqbalo shahaadadiisa, anagana nagu toosiyo jidka shuhadada Anbiyada iyo Shuhadada.
Aan soo qaadano mid ka mid ah qisooyinkii uu uga sheekeeyay saaxiibadiisa jihaadka: “Wakhtigii dagaaladii burburka badan u geystay muqdisho, ayaa isaga iyo wiil kale oo ay saaxiibo ahaayeen ka bilaabeen xaafadda Boondheere ee Muqdisho hawlo la xiriira la dagaalanka tuugada. Waxay heleen hal qori oo ah noocyadii hore ah, isagayna ku howlgaleen, markii ay tuugadii si fiican u baacsadeen, burcaddii xaafada deganaydna si fiican u nadiifiyeen, ayaa warkoodii soo shaac baxay oo la bartay, oo lagu taageeray rasaas.
Maalin hawlgal ay fuliyeen ayey ku dhaawaceen tuug, sidaasay tuugtii xaafadii kaga go’day, Sulayman iyo saaxiibkiina shaqadoodii waa la soo dhaweeyay.
Sahiidku afar sano ka hor ayuu gatay dirays uu dhinacyada kaga tolay kalmada towxiidka wuxuuna u sheegay walaalaha inuu Ilaahay weydiistay inuu ku shahiido isagoo xiran dirayskan, Allaahna wuu ka aqbalay, oo wuxuu shahiiday isagoo xiran dirayskii.
Suleymaan waxay mujaahidiintii ay is barteen ama saaxiibada ahaayeen isku waafaqeen inuu ahaa geesi, samir badan, akhlaaq badan oo dabci wanaagsan.
Wuxuu aad u jeclaa in laga sheekeeyo Xuurul ciinta jannada. Wuxuu wehel ka dhigan jirey kitaabka la yiraahdo “Mashaaricul ashwaaq”.
” مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام الى دار السلام في الجهاد وفضائله” للحافظ ابن النحاس الدمياطي
Shahiidkeena dhiigiisa lama hilmaami doono, waa minaarada iftiimaysa oo meel dheer ka baxaysa.